The Blog of Aung – Page2– အများဖတ်ဖို့ မှတ်စုများ
The Blog of Aung
အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၂)
သင်္ဘောပေါ်ကိုပင် တခါမှ မတက်ဖူးတဲ့ သူတွေကလဲ သင့်တော်သလို သင်္ဘောလက်မှတ် အတုတွေ လုပ်ပြီး ပင်လယ်ဝမှာ ရောက်နေတဲ့ သင်္ဘောကြီးကို ဆိပ်ကမ်းအထိ ခုတ်မောင်းဖို့ စုရုံးသွားကြပါတော့တယ်။
အဘတို့ ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်းပြောရင် အင်မတန်တော် အင်မတန်တတ်တဲ့ လူတော် လူတတ်ကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်းကို ချန်ထားလို့ မဖြစ်ပါဖူး။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on August 22, 2019 August 22, 2019 Categories အတွေ့အကြုံTags လူဇရိုက်3 Comments on အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၂)
အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၁)
ရရာ ရလမ်း ရှိသမျှကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မရှက်မကြောက် တောင်းရမ်းခြင်း အမှု ကျွမ်းကျင်တဲ့ အဘတို့ ရွာသားများမှာ နောက်ဆုံးပိတ် အဆုံးစွန်ဆုံး ကားကြုံလိုက်စီးရ လိုက်စီးရ ဆိုတဲ့ ရသမျှသော အခွင့်အလမ်းများကို ရှာတတ်ကြပါပေတယ်။
အဘတို့ ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်းကို ပြောရရင် အချောင်စားရတာ ကြိုက်တတ်ကြတဲ့ အကြောင်းက အစပြုရပါမယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on August 21, 2019 August 21, 2019 Categories အတွေ့အကြုံTags လူဇရိုက်1 Comment on အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၁)
ရန်ကုန်မြို့ အစိုးရကျောင်းမှာ ၁၀ တန်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာလဲ ကျောင်းစာတွေကို အာဂုံဆောင် ကျက်မှတ်နေရတဲ့ အခါ၊ ပုဂံမြို့က နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေကို ဘုရားသမိုင်း ရှင်းပြနေတဲ့ ၁၀နှစ်သား ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးများ နဲ့ သိပ်မကွာခြားလှပါဖူး။
စာအုပ် တစ်အုပ်၊ ဆောင်းပါး တပုဒ် မဆိုပါနဲ့အုံး…၊ စာတပိုဒ် စာတစ်ကြောင်းကိုပင် နားလည်အောင် ကောင်းကောင်း ဖတ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်မရှိတဲ့သူကို ပညာတတ်သူလို့ ဘယ်လို ခေါ်လို့ ရပါလိမ့်မလဲ?
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on August 18, 2019 November 27, 2019 Categories အတွေ့အကြုံTags စာပေ, ဥာဏ်ပညာ1 Comment on စာတတ်သူနဲ့ ပညာတတ်သူ
မြန်မာ အချင်းချင်း ကြားမှာ မြန်မာစကား ဝေါဟာရလဲ ရှိပါရဲ့သားနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ထည့်သုံးညှပ်သုံး ပြမှ လူအထင်ကြီးမယ် ထင်သူတွေ အတွက်မှာ သူတို့ သုံးတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားဟာ ပီပီသသ မှန်မှန်ကန်ကန် မဟုတ်တဲ့ အတွက် ရယ်စရာဖြစ်နေတာကို ရှက်တတ်မယ် ဆိုရင်တော့ကောင်းပါရဲ့။
စာရေးသူဟာ ပြည်ပနိုင်ငံများမှာ အနှစ် ၂၀ ကျော်လောက် ဆက်တိုက် နေလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မကြာသေးခင်ကမှ မိမိကိုယ်မိမိ မြန်မာစကား ပြောတတ်သေးရဲ့လား လို့ စိုးရိမ်စိတ် ဝင်မိခဲ့ပါတယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on May 21, 2019 May 21, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags ဘာသာစကား1 Comment on မြန်မာစကား ပြောတတ်သေးရဲ့လား?
ရုပ်ရှင်ပညာ ထူးချွန်ဆု ဆိုတာ ပရိသတ် အကြိုက် လိုက်ပေးစရာ မလိုပါဖူး၊ အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ပြပြီး ပညာရှင်နဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးဖို့သာ ဖြစ်ရမှာပါ။ ဥပမာ – စိန်ကျောက် အကြောင်းကို နားလည်ရင်တော့ နားလည်တဲ့ သူက အကဲဖြတ်ပေးတဲ့ အခါ၊ ဝယ်တဲ့သူ ရောင်းတဲ့သူက တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်တတ်သလိုပါဘဲ။
ဘာသာရပ် တစ်ခုမှာ ထူးချွန်ဆု ပေးတဲ့ အခါ အဲဒီ ဘာသာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေက အကဲဖြတ်ပြီး ထူးချွန်တဲ့ သူကို ဆုချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီဆု ဆိုတာကတော့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုလား၊ ရုပ်ရှင် အောင်မြင်တဲ့ဆုလား၊ ဒါမှ မဟုတ် ပရိသတ် အကြိုက် ရွေးချယ်ပေးကြတဲ့ ‘Got Talent’ လို ဆုမျိုးလား ဆိုတာတော့ မှန်းဆရ ခက်ပါတော့တယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on March 28, 2019 March 28, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags ရုပ်ရှင်1 Comment on ထူးချွန်ဆုလား? ပရိသတ်ကြိုက်ဆုလား?
‘မြန်မာ’ ဆို ဘယ်သူသိမှာလဲ?
သြစတေးလျမှာတော့ အခုထက်ထိပင် မြန်မာဆိုတာကို သာမာန် လူ ၁၀ ယောက်မှာ ၈ ယောက်လောက်က ကြားပင် မကြားဖူးကြပါဖူး။ ဘယ်နားရှိတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြရင်တောင် မြန်မာ ဆိုတာ ‘နိုင်ငံ’ လား? ဒါမှမဟုတ် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ ရဲ့ ပြည်နယ်လား? လို့မေးကြပါသေးတယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံများမှာ နေလာတာ ကြာတဲ့အခါ မိမိကို – ‘ဘယ်ကလာသလဲ?’ လို့ မေးခွန်း အမေးခံရမှာ ကြောက်တတ်လာပါတော့တယ်။ အမှန်မှာ မြန်မာပြည်က လာတယ်လို့ ဖြေရမှာ ရှက်စရာ ဖြစ်လို့၊ သိမ်ငယ် စရာဖြစ်လို့ မဟုတ်ပါဖူး။ မြန်မာပြည်ဆိုတာ ဘယ်ဆီဘယ်နား ရှိတယ် ဆိုတာ မသိကြတဲ့ အတွက် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြနေရတဲ့ အတွက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on February 25, 2019 February 25, 2019 Categories အတွေ့အကြုံTags တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးLeaveacomment on ‘မြန်မာ’ ဆို ဘယ်သူသိမှာလဲ?
မိမိတို့ မြန်မာပြည်ဟာဖြင့် အဖက်ဖက်က နိမ့်ပါးနေတယ်၊ လိုအပ်နေတယ်။ ဒါကို အမှန်အတိုင်း လေ့လာသုံ့သပ်ပြီး အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ဖို့ ဆိုတာ လိုအပ်ချက်တွေကို ရှာဖွေရမယ်၊ ဆည်းပူးရမယ်၊ စုဆောင်းကြရမှာပါ။
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ဟာ ဟောလီးဝုဒ်တို့ ဘောလီးဝုဒ်တို့ မဆိုထားနဲ့ အိမ်နားနီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ယှဥ်ပြိုင်မယ် ဆိုရင်တောင် တော်တော်လေး ခေတ်နောက်ကျနေပေမဲ့ ‘ဆင်ဆာကြောင့်၊ ပစ္စည်းကြောင့်၊ စျေးကွက်ကြောင့်’ ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတွေနဲ့ ဆိုရင်ဖြင့် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အထင်ကြီးနေတဲ့ ကျွဲအိုင်ထဲက ဖားကလေး တစ်ကောင်လို ဖြစ်နေပါတော့မယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on February 22, 2019 February 22, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags နည်းပညာ, ရုပ်ရှင်Leaveacomment on ကျွဲအိုင်ထဲက ဖားကလေး
၂၀၁၉ စစ်ဒနီမြို့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲ
သြစတေးလျနိုင်ငံ စစ်ဒနီမြို့၊ ဒါလင်ဟားဘား ဆိပ်ကမ်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ တရုတ် နှစ်သစ်ကူး မီးထွန်းပွဲတော်ကို သွားရောက်ခဲ့စဥ်က ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံများ။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on February 17, 2019 August 24, 2019 Format GalleryCategories အလည်အပတ်Tags ပွဲတော်, သြစတေးလျLeaveacomment on ၂၀၁၉ စစ်ဒနီမြို့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲ
အနောက်တိုင်းသားများသည် ခေါင်းဆောင်မှာ အသင်းအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ် ဆက်ဆံသည်။ အရှေ့တိုင်းသားများသည် ခေါင်းဆောင်မှာ ကြောက်ရွံ့ရိုသေရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟု သတ်မှတ် ဆက်ဆံသည်။
မိမိဟာ အရှေ့တိုင်း ယဥ်ကျေးမှုအောက်မှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်းလာရပြီး နောက်ပိုင်း အနောက်ပိုင်း ယဥ်ကျေးမှုအောက်မှာ ဆက်လက် ရှင်သန် နေထိုင်ရသော အခါ၊ အရှေ့ နဲ့ အနောက်တို့ရဲ့ လူနေမှု ပုံစံ ကွာခြားချက်များကို သတိပြုလေ့လာ မိခဲ့ပါတယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on February 11, 2019 February 11, 2019 Categories လေ့လာသုံ့သပ်ချက်Tags ယဥ်ကျေးမှုLeaveacomment on အရှေ့နဲ့ အနောက်
သူတို့ဆီက ကျောင်းသား သမဂ္ဂ
ဒီနေ့ မြန်မာပြည်က သတင်းတွေထဲမှာ တွေ့ရသလို ဒီက ကျောင်းသား သမဂ္ဂဟာ ဘုန်းကြီး သပိတ် ဗြောင်းပြန်ကိုင်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက် စီတန်း လှည့်အော်တာမျိုးတော့ မကြုံခဲ့ဖူးပါဖူး။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်ခဲ့စဥ်က ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဆိုတာ မကြုံခဲ့ဖူးပါ။ နေဝင်း စစ်အစိုးရက ကျောင်းသား သမဂ္ဂကို သူပုန်အဖွဲ့အစည်းလို သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ‘သမဂ္ဂ’ ဆိုတဲ့ အသံပင် ကျယ်ကျယ် မပြောရဲကြပါ။ တကယ်တန်း ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဆိုတာကိုလဲ နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလို့ဘဲ ထင်ခဲ့ပါတယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on February 9, 2019 February 11, 2019 Categories အတွေ့အကြုံTags သြစတေးလျLeaveacomment on သူတို့ဆီက ကျောင်းသား သမဂ္ဂ
မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံ
ဓါးပြ၊ သူခိုး၊ လူလိမ်များရဲ့ ရွာ
ယူနီကုဒ်အပြောင်း အထူးသတိပြုစရာ (4,712)
အခုတစ်ခါ တနိုင်ငံလုံး ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းသုံးဖို့ လုပ်လာကြပြန်တော့ သာမာန် အသုံးပြုသူတွေ အတွက် ဘယ်လို ပြောင်းရမလဲ ရှာဖွေစူးစမ်းနေတဲ့ အချိန်ကောင်းမှာ - မြွေပွေးလို ကွန်ပျူတာ သမားတွေဟာ ယူနီကုဒ် ကီးဘုတ်၊ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ်တွဲ ဖတ်နိုင် ရေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ လုပ်ပြီး ဖြန့်လာကြပါတယ်။
သူတို့ဆီက ကျောင်းသား သမဂ္ဂ (4,566)
စာတတ်သူနဲ့ ပညာတတ်သူ (2,493)
အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၁) (2,401)
ဓါးပြ၊ သူခိုး၊ လူလိမ်များရဲ့ ရွာ (2,108)
အရက်ဝိုင်းက အမြည်းလောက်နဲ့ဘဲ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ပြီး အေးအေးလူလူ ပုတီးစိတ်နေတဲ့ ဖိုးသူတော်ကို ဓါးပြဗိုလ်များက ချစ်ခင်ကြပါတယ်။
ထွန်းလှသိန်း on မိတ်ဆက်အရင် အကိုရေးတဲ့ ဘလော့မှာ စာဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တ…
ထွန်းလှသိန်း on စစ်ဒနီမြို့က အကောင်းဆုံး တရုတ် စားသောက်ဆိုင်Thai ကအဲဒီဆိုင်မှာ စားဖူးပါတယ်၊ ‌စျေးကြီးလို့ မကြိ…
ထွန်းလှသိန်း on မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံအီး လိုညှပ်မှ လူရာဝင်တယ် ထင်ကြတယ်၊ အီး လိုတတ်မှ စာ…
aung on မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံပညာမတတ်တော့ စဥ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ် နည်းပါးတယ်၊ စဥ်းစား…
Kyaw Soe Win on မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံပြည်ပရောက်ဖူးတဲ့လူအများစုက ယူနီကုဒ်ရဲ့ အရေးပါမူကို…
Ajin Peter on မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံUnicodeစံနစ် တီထွင်သူများအား ကျေးဇူးတင် လေးစားပါသည…
Aung Moe Htoo on မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံMyanmar Unicode စနစ်ဟာဘာသာပြန်ဖို့ အတွက်အထောက်အကူ…
aung on မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံI believe it will take time until Myanmar Unicode…
aung on မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံဘာသာတိုင်းမှာ ပထမ ဘာသာပြန်အခက်အခဲ အမှားအယွင်းတွေ ရ…
Janet on မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံThere won’t be “only Unicode” system as long as pe…
အောက်ပါ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကို နှစ်သစ်မှု (Like) ပြုလုပ်ထားလျှင် ဤဆိုဒ်မှာ အသစ်ရေးတင်တိုင်း သိနိုင်ပါမည်။
Tweets by AungTweets